ဆီးဂိမ်းတွင် ကမ္ဘာ့ကြက်တောင်ချန်ပီယံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဟု သက်ထားသူဇာ ပြော – Myanmar Live
သတင်းများ / အားကစား / ဖျော်ဖြေရေး / မြန်မာ
ဆီးဂိမ်းတွင် ကမ္ဘာ့ကြက်တောင်ချန်ပီယံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဟု သက်ထားသူဇာ ပြော
အကြိမ် ၃၀ မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ကမ္ဘာ့ကြက်တောင်ချန်ပီယံများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည့် အတွက် မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ အနေဖြင့် ခက်ခဲသည့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်မည်ဟု သူမ ပြောကြားသည်။
သက်ထားသူဇာက“ဆီးဂိမ်းမှာတော့ လူကောင်းတွေ အများကြီးလာကြမှာ။ ထိုင်းက ဒီနှစ်အသင်းအပြည့် ကစား မယ်။ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံတွေတောင် ပါလာတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကလည်း လာမှာဆိုတော့ နည်းနည်း ခက်လိမ့်မယ်” ဟု ပြောသည်။
သက်ထားသူဇာ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းဇော်ကလည်း “ဆီးဂိမ်းမှာတော့ အနည်းလေး Semi Final ဝင်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့။ Finalအထိတော့ မှန်းမထားပါဘူး။ Semi Final ဝင်နိုင်ရင်ပဲ တော်တော်လေး အဆင့်မြင့် နေပြီ။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း အဲဒီသုံးနိုင်ငံလုံးက အကုန်လုံးက တကယ့် တော်တဲ့သူတွေနဲ့ ရိုက်ရမှာဆိုတော့ ခက်တာတော့ ခက်မှာပေါ့”ဟု ဆိုသည်။
သက်ထားသူဇာ အနေဖြင့် SEA GAMES ပြိုင်ပွဲအတွက် လက်ရှိတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ လေ့ကျင့်ရေးများ ပြုလုပ် နေသည်မှာ ၂လခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ မလေးရှားမှ နည်းပြနှင့် သက်ထားသူဇာ၏ ဖခင်ဖြစ်သူတို့က အနီးကပ် လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ပေး လျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ဦးထွန်းထွန်းဇော်က“သူ(သက်ထားသူဇာ) တော်တော်လေး တိုးတက်လာတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Speed တွေ၊ Power တွေ ကောင်းလာတယ်။ သူ့လိုအပ်ချက်တွေကို အဓိက ထားပြီး မလေးရှားမှာ လေ့ကျင့်ပေး နေတယ်။ အဲဒါတွေကိုပဲ နည်းပြနဲ့ ကျနော်တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ပေးတယ်”ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ဆီးဂိမ်းတွင် သက်ထားသူဇာအပါအဝင် ၆ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်ပြီး အင်အားကြီးနိုင်ငံမှ ကြက်တောင်အားကစားသမားများ ပါဝင်ကစားကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အခက်အခဲရှိ သော်လည်း အမျိုးသမီးတဦးချင်းပွဲ၌ အမြင့်ဆုံး တတိယဆုရရှိရန် မျှော်မှန်းထားသည်ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။30th SEA GAMESပြိုင်ပွဲကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံပြီး နိုဝင်ဘာလ ၃ဝရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ခုနစ် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် သက်ထားသူဇာ သည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် World rankings 61 တွင်ရှိကာ ပွဲပေါင်း ၉၂ပွဲကစားထားရာမှ ပွဲ၇၀နိုင်ထားပြီး ၂၂ပွဲရှုံး ထား သည်။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံအတွက်ကျေးဇူတင်ပါသည် : The Irrawaddy Burmese, Thet Htar Thu Zar FB, ELEVEN MEDIA GROUP Co.,Ltd.
TaggedMyanmarMyanmar live newsMyanmarliveSportswomen spotsသတင်းများအားကစားဖျော်ဖြေရေးမြန်မာ
Previous Article ကိုယ်တွေ့ကြုံမှယုံမိတယ်
Next Article မြန်မာ !! လှေသားအချင်းချင်းသတ်ကြပြန်ပြီ